Puto's Recipe, အရသာအရှိဆုံးဖိလစ်ပိုင်အစားအစာဖြစ်သည် Absolut ခရီးသွားခြင်း
ဒံယလေက | | ဖိလစ်ပိုင်
လာရောက်လည်ပတ်သူခရီးသွားအတော်များများ ဖိလစ်ပိုင်အထူးသဖြင့်စပိန်စကားပြောသူများသည်တိုင်းပြည်အတွင်းအကျော်ကြားဆုံး gastronomic ခဲဖွယ်စားဖွယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော the the таңကိုအံ့အားသင့်ကြသည် ကလေး။ ၎င်းသည်သိပ်ကောင်းလွန်းမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်လူကြိုက်များပြီးအရသာရှိသောအစားအစာဖြစ်သည်။
ဤ ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဆန်မုန့်စိမ်းကိတ်မုန့် ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်လက်ဖက်ရည်နှင့်အခြားထည့်သွင်းခြင်းများဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသော်လည်းများသောအားဖြင့်ရိုးရာဟင်းလျာများနှင့် တွဲဖက်၍ စားလေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်နိုင်ငံ၏ဒေသအားလုံးနီးပါးတွင်ချက်ပြုတ်ပြီးစားသုံးကြသည်။
1 fuck ဆိုတဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ
2 အမျိုးမျိုးသော fuck ဆိုတဲ့
2.1 Bagas fuck ဆိုတဲ့
2.2 bumbong fuck ဆိုတဲ့
2.3 lusong fuck ဆိုတဲ့
2.4 Maya fuck ဆိုတဲ့
2.5 pao fuck ဆိုတဲ့
ဆန်သည်အာရှရှိအခြားအစားအစာများစွာရှိသည့်အခြားဟင်းလျာများတွင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည့်အတွက်ဆန်သည်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်ချက်ပြုတ်သူများက ၀ တ်ဆင်သည် elongated ဆန်၏ဒေသခံအမျိုးမျိုး basmati ၏ရေးဆင်တူ။ ဆန်အနည်းငယ်ပျော့ပြောင်းနှင့်အနည်းငယ်ချဉ်ဖို့နေ့ချင်းညချင်းစိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောတဆေးကိုလည်းဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အထောက်အကူပြုသည်။
တစ်ရက်လုံးရေထဲ၌ပြီးလျှင်ဆန်သည်မြေမှုန့်ဖြစ်သည် galapong။ အစဉ်အလာအရဤကြိတ်ကိုကျောက်စက်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူနိုင်ငံ၏စူပါမားကက်အားလုံးနီးပါး၌သင်ဝယ်ယူပြီးသားဖြစ်သည် galapong ပြင်ဆင်ထားသည်။
puto ကိတ်မုန့်လုပ် Galapong ပြင်ဆင်မှု
puto မျိုးကွဲများစွာရှိသည် (သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့နောက်မှတွေ့လိမ့်မည်), ရိုးရာ canon စာရွက်ကိုအောက်ပါပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူပြင်ဆင်သည်:
ဆန်မှုန့် ၄ ခွက် (galapong).
သကြား2ခွက်။
မုန့်ဖုတ်မှုန့်2ဇွန်း။
နို့2ခွက် (အုန်းသီးနို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်) ။
ရေ2သို့မဟုတ်3ခွက်
optional ကို: အစားအစာအရောင်နှင့် tapoca ၏ဇွန်း။
ပထမ ဦး စွာသင်လုပ်ရမယ် ခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများဆန်ခါ (ဆန်မှုန့်နှင့်သကြား) နှင့်ကြီးမားသောပန်းကန်လုံးထဲသို့သူတို့ကိုငါသွန်းလောင်း။
အောက်ပါတို့ကိုထည့်သွင်းထားသည် စိုစွတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများ (နို့၊ ကြက်ဥနှင့်ရေ) ။ သင်ရသည့်တိုင်အောင်အရာအားလုံးကိုကောင်းစွာရိုက်နှက်သည် ယူနီဖောင်းရောစပ်။ ဤသည်ကိုтапီအိုကိုထည့်ရန်နေရာဖြစ်သည် gelatin textureနှင့်အရောင်။
ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တယ် မှို ထောပတ်နှင့်အတူကောင်းစွာပျံ့နှံ့ (သူတို့ကိတ်မုန့်ကိုပြင်ဆင်ရာတွင်အသုံးပြုသောတူညီသောအစေခံနိုင်ပါတယ်) ။
အဆိုပါအရောအနှောအနည်းငယ်သာထက်ဝက်ကျော်ကသူတို့ကိုဖြည့်, မှိုထဲသို့သွန်းလောင်းသည်။ ဒိန်ခဲတစ်ပိုင်းကိုထိပ်တွင်ထည့်ထားသည်။
အဆိုပါဖြည့်မှိုရှိရာမီးသင်္ဘော၌နေရာချကြသည် မိနစ် ၂၀ ခန့်ချက်ပြုတ်ပါ။ သင့်တွင်ရေနွေးငွေ့မရှိလျှင်ပုံမှန်မီးဖိုကို ၁၀ မိနစ် ၁၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပြီးတာနဲ့ချက်ပြုတ်သည်ကိတ်မုန့် မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အအေးကြကုန်အံ့ သူတို့ကို unmolding မီ။
La ရေငွေ့ ဖိတိုဖိလစ်ပိုင်မီးဖိုချောင်သုံးကိရိယာဖြစ်သည် က။ ဤမီးငွေ့အမျိုးအစားကိုသတ္တုပြားများနှင့် ၀ ါးပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်း၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်သည်တရုတ်ခြင်းတောင်းများနှင့်ဆင်တူသည် ဒင်းဆမ်းပိုကြီးပေမယ့်။ ၀ ါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဖုံးသည်ကိတ်မုန့်ပေါ်သို့ငွေ့ရည်မကျစေရန်ခွင့်ပြုသည့်ပုံသဏ္conာန်ရှိသည်။
အမျိုးမျိုးသော fuck ဆိုတဲ့
puto ကိတ်မုန့်များသောအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည် ဆေးထည့်သည်ကြက်ဥ၊ ထောပတ်၊ ဝက်သား၊ အုန်းသီးကြိတ်ခွဲခြင်း ... ဤအပြင်အပြင်ဒေသတွင်းမျိုးကွဲများနှင့်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ဤပန်းကန်ကိုပြင်ဆင်နည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဤရွေ့ကားလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်စပ်စုအချို့ကို:
Bagas fuck ဆိုတဲ့
၏ဒေသ၏ပုံမှန် Bicol။ မယားစကားများသည်ပြတ်သားသည်အထိကြာသည်။ ဒါ့အပြင်တိုင်းပြည်၏ဤfromရိယာကနေဖြစ်ပါတယ် fuck ဆိုတဲ့ရေချိုးခန်းချိုသောအုန်းသီးနှင့်ပြည့်စုံသော။
bumbong fuck ဆိုတဲ့
ဒါဟာရိုးရာစာရွက်ဖြစ်ပါတယ် Navidad အဘယ်သူ၏ပီပီအတွက်အသုံးပြုသည် ဆန် ပင်လယ်ဓားပြ၎င်း၏ခရမ်းရောင်အရောင်နှင့်စေးကပ်သော texture များအတွက်အထူးသဖြင့်မှတ်မိသည်။ ဤ puto အမျိုးအစားကိုဆားငန်ရေတွင်ထည့်။ ထောပတ်မထည့်မီ ၀ ါးတိုင်များတွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
lusong fuck ဆိုတဲ့
ရိုးရာအမျိုးမျိုး Pampanga အဘိဓါန်Luzon ကျွန်း၏အလယ်ပိုင်းဒေသ။ သူတို့ကသူတို့ပြင်ဆင်သောမှိုစတုရန်းဖြစ်ကြပြီးကိတ်မုန့်တစ်အရသာရှိသည်သောအထူးသဖြင့်တင်ပြ anise.
Maya fuck ဆိုတဲ့
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် desayuno ရိုးရာ Cebuan စကားပြောဒေသများ။ ဂျင်းဖျော်ရည်ကိုဂန္ထဝင်အရောအနှောတွင်ထည့်ပြီး၊ ဒုတိယပစ်ခတ်မှု။ ကိတ်မုန့်များသည် discs များကဲ့သို့ပြားချပ်ချပ်ပုံစံရှိပြီးနံနက်ပိုင်းတွင်ချောကလက်သို့မဟုတ်သစ်သီးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သီးစားခြင်းဖြစ်သည်။
pao fuck ဆိုတဲ့
ကိတ်မုန့်တွေကအရသာရှိတဲ့ဝက်သားနဲ့ပြည့်နေတယ်။ သူတို့ကလူကြိုက်များတဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ကြသည် siopao ဒါမှမဟုတ်တရုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်စားတဲ့ "ပူပြင်းတဲ့ Bun"
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ဖိတိုဖိလစ်ပိုင်မုန့်ချိုအချိုဆုံးသောမုန့်တစ်လုံးဖြစ်သည်
Delphi ရှိ Pythian Games၊ သမိုင်းနှင့်အားကစား